Daawo Sawir:- laga sameeyay Dam Jadiid oo Kor u sida Siyaasi ay isleeyihiin R/Wasaare ayuu ku haboonyahay ! - iftineducation.com
Daawo Sawir:- laga sameeyay Dam Jadiid oo Kor u sida Siyaasi ay isleeyihiin R/Wasaare ayuu ku haboonyahay !
iftineducation.com – Kaartooniistaha Soomaaliyeed ee Amiin Caamir ayaa soo bandhigay Sawir uu ku muujinayo Xubno kamid ah raga ugu sareeya Ururka Dam Jadiid oo kor u sida Siyaasiga Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke, oo mar R/Wasaare kasoo noqday Xukuumadhiii KMG ahaa .
Dam Jadiid ayaa u aragta Cumar Cabdi Rashiid in uu u noqon karo badalka R/Wasaare Cabdi Wali Sheekh Axmed hadii Kalsoonida ay kala noqdaan Baarlamaanka, waxa ayna ka fiirsanayaan Dam jadiid Siyaasigan oo ay u arkaan mid qunyar socod ah oo dantooda ku fushan karaan.
Madaxweynaha iyo Xerta ku xeeran ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday wadatashiyo ku aadan ruuxa loo dhiibo karo R/Wasaaraha marka Cabdi Wali Meesha ka baxo, waxaana miiska saaran xubno dhoor ah oo xulitaan lagu sameenayo.
Muuqaalka Haweeney fulisay dilka Macallimad Mareykan ah
Daawo Muuqaal:- Mucjisada wado weeyn oo gawaari badan marayeen oo si toos ah u go´day , Yaa ku dhex dhacay ?